China FPGA မြန်နှုန်းမြင့်တိုက်နယ်ဘုတ်အဖွဲ့ညီလာခံထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်စက်ရုံ။ | Kaisheng PCB
သတ္တုစပ် Electrolytic နီကယ်၊ Hard ရွှေနှင့်ရွေးချယ်ရွှေ
အလွှာများ - 12 အလွှာ PCB
အခြေခံပစ္စည်း: FR-4 + RO4003C
Metal Coating: Electrolytic နီကယ်၊ Hard ရွှေနှင့်ရွေးချယ်ရွှေ ထုတ်လုပ်မှုပုံစံ: SMT + အလွှာများ - ၁၂ အလွှာ PCB
အခြေစိုက်စခန်းပစ္စည်း: FR-4 + RO4003C အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်: SGS, ISO, RoHS MOQ: မရှိပါ MOQ
ဂဟေဆက်အမျိုးအစားများ - ခဲ (RoHS လိုက်နာမှု) One-Stop န်ဆောင်မှုများ: PCB ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် turnkey PCB တပ်ဆင်ခြင်း စမ်းသပ်ခြင်း: ၁၀၀% AOI / X-Ray / Visual Test
သော့ချက်စာလုံးများ - PCB ညီလာခံ၊ PCB ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ PCB လူ ဦး ရေ၊ PCB ညီလာခံထုတ်လုပ်သူများ၊ PCB တပ်ဆင်ကုန်ကျစရိတ်၊ စျေးပေါ PCB ညီလာခံ, ပုံနှိပ်တိုက်နယ်ဘုတ်အဖွဲ့ညီလာခံကုမ္ပဏီများ
အဘယ်ကြောင့် PCBFuture ကိုရွေးချယ်ပါ?
SMT အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ - ကျွန်ုပ်တို့သည်တစ်နေ့လျှင်အချက် (၄) သန်းထုတ်လုပ်နိုင်သောနေရာချထားစက်များနှင့် optical စစ်ဆေးရေးစက်ကိရိယာများကိုတင်သွင်းခဲ့သည်။ ထုတ်ကုန်အရည်အသွေးကိုထိန်းသိမ်းရန်အတွက်လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုစီသည် QC ၀ န်ထမ်းများတပ်ဆင်ထားသည်
DIP ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း - လှိုင်းတံပိုး ၂ ခုရှိသည်။ လုပ်သားများသည် plug-in အမျိုးမျိုးကိုဂဟေဆော်ရာတွင်ကျွမ်းကျင်ကြသည်။
2. အရည်အသွေးအာမခံချက်, မြင့်မားသောကုန်ကျစရိတ်စွမ်းဆောင်ရည်
high-end ပစ္စည်းကိရိယာများတိကျပုံသဏ္partsာန်အစိတ်အပိုင်းများ, BGA, QFN, 0201 ပစ္စည်းများ paste နိုင်ပါတယ်။ ၎င်းကိုလက်ဖြင့်တပ်ဆင်ခြင်းနှင့်အမြောက်အများသောပစ္စည်းများနေရာချထားခြင်းအတွက်စံနမူနာအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်သည်။ နမူနာနှင့်ကြီးမားသောနှင့်သေးငယ်တဲ့သုတ်နှစ် ဦး စလုံးထုတ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။
၃။ SMT နှင့်အတွေ့အကြုံကြွယ်ဝသောအီလက်ထရောနစ်ထုတ်ကုန်များရောင်းချခြင်း၊
ထောင်ပေါင်းများစွာသောအီလက်ထရောနစ်ကုမ္ပဏီများအတွက်မော်တော်ယာဉ်သုံးစက်ကိရိယာများနှင့်စက်မှုထိန်းချုပ်မှု Motherboards များအတွက် SMT ချစ်ပ်အပြောင်းအလဲနဲ့ ၀ န်ဆောင်မှုများပါ ၀ င်သော ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးပါ။ ထုတ်ကုန်များကိုဥရောပနှင့်အမေရိကန်သို့မကြာခဏတင်ပို့ပြီးအရည်အသွေးနှင့် ၀ ယ်ယူသူအသစ်များကအရည်အသွေးကိုအတည်ပြုနိုင်သည်။
ပစ္စည်းများကိုပုံမှန်ပြီးစီးပြီးနောက် ၃၅ ရက်အတွင်းအချိန်မီဖြန့်ဝေပေးမည်။ သို့မဟုတ်ထိုနေ့တွင်ပင်ပြန်လည်ပေးပို့နိုင်သည်။
4. ခိုင်ခံ့သောပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုစွမ်းရည်နှင့်ပြီးပြည့်စုံသော - ပြီးနောက်ဝန်ဆောင်မှု
ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုသည် ၂၄ နာရီအတွင်းမည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုတုန့်ပြန်မည်ဖြစ်ပြီးသင်၏အမှာစာကိုတတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးဖြေရှင်းပေးမည်။
SMT patch ကိုအပြောင်းအလဲနဲ့
DIP plug-in အပြောင်းအလဲနဲ့
PCBFuture ၏ PCBA Foundry ပစ္စည်း၏စက်မှုထိန်းချုပ်မှုဘုတ်၏အားသာချက်များ:
နိမ့်ဝယ်ယူကုန်ကျစရိတ်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင်အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းများကျွမ်းကျင်ပြီးအရည်အသွေးနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသော ၀ ယ်ယူရေးလမ်းကြောင်းများနှင့်ရေရှည်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရှိသောကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ဝယ်ယူရေး ၀ န်ထမ်းများရှိသည်။ ၎င်းသည် MOQ ကုန်ကျစရိတ်သုညကိုအခြေခံသည်။
အလုပ်သမားကုန်ကျစရိတ်ကိုလျှော့ချခြင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်အီလက်ထရောနစ် ၀ ယ်ခြင်း၊ အီလက်ထရောနစ်အင်ဂျင်နီယာများ၊ အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းများနှင့် IQC အစိတ်အပိုင်းများတပ်ဆင်ထားသည်။ ဖောက်သည်များအနေဖြင့်ပြုပြင်ရန်မလိုအပ်ပါ။
ဆက်သွယ်ရေးကုန်ကျစရိတ်ကိုအကြီးအကျယ်လျှော့ချပေးသည်၊ ကုန်ကြမ်းပေးသွင်းသူအများအပြားကိုဖောက်သည်များမလိုအပ်ဘဲ ၀ န်ဆောင်မှုကိုပြီးအောင်လုပ်ပေးပါမည်။
ရှင်းလင်းသောတာဝန်ဝတ္တရား။ အကယ်၍ အရည်အသွေးပြproblemနာရှိပါကကုန်ကြမ်းပြproblemနာဖြစ်စေ၊ ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်ပြwhetherနာဟုတ်မဟုတ်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်မလိုအပ်ပါ။ ကျနော်တို့အပြည့်အဝတာဝန်ရှိသည်။
PCBFuture သည်ဖောက်သည်များအားပရော်ဖက်ရှင်နယ်ပီစီထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ပစ္စည်း ၀ ယ်ခြင်း၊ တစ်နေရာတည်းတွင်လျင်မြန်သောထုတ်လုပ်မှုနှင့်အခြားအရည်အသွေးမြင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုဖောက်သည်များပေးနိုင်သည့် PCBA OEM ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ သင့်တွင်မေးခွန်းများရှိပါကဆက်သွယ်ပါsales@pcbfuture.com ငါတို့သည်သင်တို့ ASAP သင်ပြန်ကြားပါလိမ့်မယ်။
ရှေ့သို့ Flex PCB ညီလာခံန်ဆောင်မှုများ
နောက်တစ်ခု: စက်မှုထိန်းချုပ်မှုဘုတ်အဖွဲ့အပြည့်အဝ turnkey ညီလာခံ